दोर्जे शुग्देनबारे परम पावन क्याब्जे जोङ्ग रिम्पोछेको शिक्षा | Tsem Rinpoche
ट्रान्सक्रिप्टको लागि क्लिक गर्नुहोस्
(घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन लसएन्जलसमा पवित्र क्याब्जे जोंग रिन्पोछेबाट दोर्जे शुग्देन सोग्ते (दिक्षा)को अनुरोध गर्दै बोल्नुहुन्छ ।)
मेरो मूल गुरु पवित्र क्याब्जे जोंग टुल्कु दोर्जे च्यांग लोब्सांग सुन्दु थुब्तेन ग्याल्छेनले सबैभन्दा बढी अवतरित देवता ग्याल्छेन दोर्जे शुग्देनको जीवन समर्पण दिक्षा अत्यन्त पवित्र र उत्कृष्ट जीवनी र कथाहरुको साथ दिनुहुन्छ; सशक्तिकरण दिँदाको आवाजको रेकर्डिङ यहाँ प्रस्तुत छ।
म, घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन विधार्थी औपचारिक रुपमा अनुरोध गर्छु।
(पवित्र क्याब्जे जोंग रिन्पोछे अनुवादक मार्फत बोल्न शुरु गर्नुहुन्छ)
दोर्जे शुग्देनको यो दिक्षा प्राप्त गरेपछि, तपाईंले पुजा महिनामा एक पटक गर्नुपर्दछ। साथै प्रतिबद्धताको पालन गर्न पनि आवश्यक छ, र तपाईंले सम्प्रदायसँग र वंशसँग प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ ।
यसको मतलब, उदाहरणको लागि तपाईंले विभिन्न परम्पराबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्छ। तर मुख्यतः तपाईंको साधना, तपाईंको ध्यान, तपाईंको उर्जा यो सम्प्रदाय, गेलुग्पा वंशमा लगाउनुपर्दछ।
यदि तपाईं कुनै प्रकारको बौद्ध धर्मका धार्मिक क्रिया अन्य बौद्ध सम्प्रदायमा गर्न चाहनुहुन्छ भने, कुनै किसमका कार्यहरु गर्नु ठिक छ, तर तपाईंको मुख्य साधना वा प्रमुख साधनामा, तपाईंले लामा चोंखापाको यस वंशसँग प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। त्यसकारण मैले पहिले पनि उल्लेख गरे कि तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यदि तपाईं पक्का हुनुहुँदैन भने तपाईंले दिक्षा लिनुहुँदैन । त्यसकारण एक पटक तपाईंले यो दिक्षा लिएपछि तपाईंले गेलुग वंशप्रति प्रतिबद्धता लिनुपर्दछ र सबै चिजको मिश्रण हुन नदिन यो आवश्यक छ।
कहिलेकाहीँ मानिसहरुमा हल्ला चल्छ र उनीहरु भन्छन्, “ए, शुग्देन दिक्षा त……….”, मानिसहरु भन्छन् कि शुग्देन दिक्षा लिन आवश्यक छैन वा, केहि मानिसहरु भन्छन् शुग्देन राम्रो रक्षक पनि होइनन्।
यो सहि होइन। मानिसहरु जोसँग शुग्देन दिक्षा छ र जसले दोर्जे शुग्देनको साधना गर्छन्, ती मानिसहरुसँग अत्यन्त महान, सफल ध्यान र साधना हुन्छ। यहाँसम्म कि सांसारिक साधन, जस्तै कि सांसारिक कार्यहरु र व्यापार व्यवसाय र जागिर; सबै सफल हुन्छ।
किनकि भनिन्छ कि दोर्जे शुग्देन एक गेलुग्पा रक्षक हुन्, त्यसकारण केहि मानिसहरुले सोच्छन् कि जब तपाईं ‘गेलुग्पा रक्षक’ भन्नुहुन्छ, उनीहरु सोच्छन् कि हाम्रो संकुचित मानसिकता छ र उनीहरु सोच्छन् कि जसले शुग्देन साधना गर्छन्, उनीहरुको संकुचित मानसिकता हुन्छ र उनीहरु सोच्छन् कि शुग्देन साधना गर्ने मानिसहरु साम्प्रदायिक हुन्छन्। वास्तवमा, साम्प्रदायिक भन्दैनन् किनकि सायद उनीहरु आफैं साप्रदायिक छन् त्यसकारण उनीहरु सोच्छन् कि मानिसहरु जसले शुग्देन साधना गर्छन्, उनीहरु साम्प्रदायिक हुन्। मानिसहरु यी सबै प्रकारका कथा र हल्लाहरु बनाउंछन्, तपाईंलाई यो कुरा पहिले नै थाहा हुनुपर्दछ।
केहि मानिसहरु, शुग्देन दिक्षा र शिक्षाहरु लिएपछि, जब यी हल्लाहरु सुन्छन्, उनीहरु सोच्छन्……. अज्ञानी मानिसहरु, संकुचित मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले त्यस्ता हल्ला फैलाउँछन्, र केहि मानिसहरुले यसलाई सहि मान्छन् र सायद उनीहरु साधना छोड्छन् वा उनीहरु यो रक्षक समेत चाहँदैनन् जुन खराब कुरा हो, र यो मानिसहरुका लागि ठिक हुँदैन।
वास्तवमा यो तपाईंमा निर्भर गर्छ, तपाईं जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईंमा निर्भर गर्छ; तपाईंको आफ्नो जीवन, सबथोक तपाईंको आफ्नै इच्छा र तपाईंको स्वतन्त्रता हो र तपाईंको आफ्नै ज्ञान हो, र तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ र के चाहनुहुन्न तपाईंमा निर्भर गर्छ तर म तपाईंको लागि के सहि छ, त्यसबारे बोल्दै छु। तपाईंले के गर्ने भन्नेबारे धेरै सावधान हुनुपर्दछ र तपाईं चांडै भ्रमित हुने व्यक्ति हुनुहुँदैन; तपाईंलाई कसैले “यो राम्रो होइन” भन्दैमा मान्नुहुँदैन र मानिसहरुबाट यी सबै कथाहरु सुन्नुपर्दछ। तपाईंले आफ्नो विचार बद्लिनुहुँदैन र तपाईं सधै सजक हुनुपर्दछ र र तपाईंले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
तिब्बतमा यसले फरक पर्दैन कि मानिसहरु के भन्छन् र वास्तवमा तिब्बतमा, धेरै व्यक्तिहरु छन् जसले यसलाई मान्छन् र यो साधना गर्छन् र वास्तवमा, सधै त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरु छन्, जसले यस प्रकारको ध्यान गर्छन्।
त्यसकारण तपाईंले यो थाहा पाउनुपर्दछ तपाईं यसबारे निश्चित हुनुपर्दछ वा अन्यथा पछि गएर, मानिसहरुले तपाईंलाई “ए, यो साधना राम्रो छैन” भने भने र उनीहरुले सबै प्रकारका कथा र हल्लाहरु बनाए भने… त्यसपछि तपाईंले छोड्नुभयो भने, त्यो तपाईंको लागि राम्रो हुँदैन र यो तपाईंको ठुलो गल्ति हुनेछ। त्यसकारण तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं यो प्रतिबद्धता कायम राख्नुहुन्छ र यसको पालन गर्नुहुन्छ।
किनकि यो तपाईंको इच्छा हो, र कसैले तपाईंलाई यो गर्नुपर्दछ वा यो गर्नैपर्दछ भनेर भन्दैन र तपाईंको आफ्नै ईच्छाले… तपाईंले यो गर्न छनौट गर्नुभयो त्यसकारण यसबारे अत्यन्त सावधानीपूर्वक सोच्नुपर्दछ। कसैले तपाईंले यो गर्नैपर्दछ भनेर भन्दैन तपाईंको इच्छाबिना, र यो यस्तो हो कि यदि तपाईं गर्न चाहनुहुन्न भने र तपाईंलाई कसैले “तपाईंले यो गर्नुपर्दछ वा यो गर्नुहुँदैन” भन्न सक्दैन।
किनकि यो भानिन्छ कि दोर्जे शुग्देन एक गेलुग्पा रक्षक हुन्, त्यसकारण केहि मानिसहरु यो सोच्छन् कि जब तपाईंले ‘गेलुग्पा रक्षक’ भन्नुहुन्छ, उनीहरु सोच्छन् कि तपाईं संकुचित मानसिकताको हुनुहुन्छ र उनीहरु यो सोच्छन् कि शुग्देन साधना गर्ने मान्छेहरु, संकुचित मानसिकताका हुन्छन् र उनीहरु यो सोच्छन् कि शुग्देन साधना गर्ने मान्छेहरु, साम्प्रदायिक हुन्छन्। वास्तवमा, साम्प्रदायिक भन्दैनन्… सायद उनीहरु आफैँ साप्रदायिक छन् त्यसकारण उनीहरु सोच्छन् कि मानिसहरु जसले शुग्देन साधना गर्छन्, उनीहरु साम्प्रदायिक हुन्छन्। मानिसहरु सबै प्रकारका कथा र हल्लाहरु बनाउछन्, तपाईंलाई यसबारे पहिले नै थाहा हुनुपर्दछ।
यी एक अत्यन्त विशेष रक्षक हुन् र धेरै अमुल्य पनि, त्यसकारण तपाईंले पुजा मासिक रुपमा गर्नुपर्दछ।
तपाईंले महिनामा एक पटक पुजा गर्नुपर्दछ, प्रार्थना, लामो साधना वा लामो प्रार्थना, महिनामा एक पटक गर्नुपर्दछ तर उदाहरणको लागि, यदि अर्को महिना तपाईं धेरै धेरै व्यस्त हुनुहुनेछ भन्ने थाहा छ भने, यदि तपाईंले अर्को महिना यो गर्न सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ र यो असम्भव छ भन्ने लाग्छ भने तपाईंले अर्को महिनाको लागि पुजा यहि महिना गर्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो महिना नै दुई दिनभित्र तपाईंले दुईवटा पुजा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई साधना, प्रार्थना कसरी पाठ गर्ने भन्ने थाहा छैन; यदि तपाईं साधना गर्न सक्नुहुन्न वा तपाईं त्यो साधना गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईंले लामा वा भिक्षु वा शिक्षकहरुसँग तपाईंको लागि यो गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जान्न धेरै महत्वपूर्ण छ कि, तपाईंले साच्चिकै यो दिक्षा लिन चाहनुहुन्छ, र यो खाली अरु मानिसहरुले यो दिक्षा लिएको कारणले गर्दा तपाईंले यहाँ आई दिक्षा लिनुभएको होइन। यदि तपाईंलाई “मैले यो गर्नुपर्दछ र यदि मैले यो गरिन भने सायद म केहि चिज छुटेको महसुस गर्नेछु”, भन्ने लाग्छ भने त्यो गलत सोच हो। यदि तपाईं साच्चिकै प्रतिबद्धता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले त्यो लिनुपर्दछ। अन्यथा तपाईंले लिनुहुँदैन।
मैले यसअघि उल्लेख गरेझैँ, यदि तपाईंलाई प्रार्थना कसरी गर्ने, पाठ कसरी गर्ने थाहा छैन र यदि तपाईंले महिनामा एक पटक पुजा गर्न सक्नुहुँदैन भने तपाईंले प्रार्थना र मासिक पुजा गर्न लामा वा तपाईंको साथीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंले उनीहरुलाई तपाईंको स्थानमा बोलाउन सक्नुहुन्छ, र पुजा गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
वा यदि तपाईंले यो पुजा आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्न भने, स्थान लामो दुरीमा छ भने पनि, गुम्बाजस्तो स्थानमा वा जहाँ लामा वा साथी छन् – तपाईंले उनीहरुलाई वा उसलाई यो पुजा गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले यो कुरा बारम्बार भन्नुको कारण यो हो कि, यदि तपाईं कुनै पनि व्यक्तिको कुरा त्यत्तिकै मान्नुहुँदैन र यदि तपाईंलाई सजिलै भ्रमित गर्न सकिदैन भने त्यो ठिक हुन्छ।
तर कहिलेकाहीँ यो सम्भव छ कि लामा वा भिक्षु वा कुनै प्रकारको शिक्षकले समेतले “यो ठिक होइन र यो गलत हो, र यो प्रकारको साधना तपाईंले गर्नुहुँदैन” भन्न सक्छन्। त्यसो भएमा तपाईंले आफ्नो विचार बद्लिने सम्भावना हुन्छ। तपाईंले सोच्नुहुन्छ कि “किनकी लामा वा अन्य प्रकारका शिक्षकले मलाई यो भनिरहेका छन्, सायद यो सत्य हो” त्यसरी मानिसलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिन्छ र उनीहरुले आफ्नो विचार बदल्न सक्छन्।
र यो एउटा कारण हो, जसले गर्दा धेरै पश्चिमाहरु धर्मलाई गहिरो रुपमा बुझ्दैनन्, र त्यसको महत्व र प्रतिक र अर्थहरू बुझ्दैनन्। उनीहरुलाई सहि गुरु को हो को सहि गुरु होइन, त्यो पनि थाहा हुँदैन, उनीहरु जहाँ शिक्षक वा कुनै प्रकारको लामा भेट्टाउछन्. त्यहाँ गईहाल्छन् र उनीहरु त्यहाँ गई सबै प्रकारका शिक्षा सुन्छन् र त्यसकारण। पश्चिमाहरु साधारणतया धेरै ईमान्दार मानिस, र सिधा हुन्छन र धेरै… उनीहरु राम्रा मानिस हुन्छन्, उनीहरुसँग राम्रो हृदय हुन्छ।
जस्तै भारत र तिब्बतमा, कहिलेकाहीँ उनीहरु… केहि मानिसहरु शुग्देनलाई मान्दैनन् तर उनीहरु आफु शुग्देनको साधना गर्ने बताउँछन्, उनीहरु साधना गर्छन् र उनीहरु अरुथोक नै भन्छन्। मानिसहरु जे भन्छन् र जे गर्छन् त्यो अलग हुन्छ र त्यसकारण यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार हुन्छ।
भारतमा, केहि मानिसहरुले अरु मानिसहरुलाई, अरु तिब्बतीहरुलाई भ्रममा पार्छन्। जब केहि तिब्बतीहरु उनीहरुलाई शुग्देन पुजा गर्न अनुरोध गर्छन्, उनीहरु भन्छन्, “हुन्छ, म तपाईंको लागि पुजा गरिदिन्छु।” तर पछि उनीहरु जान्छन् र अरु थोक नै गर्छन् र शुग्देन पुजा गर्दैनन्- उनीहरु अर्कै फरक पुजा गर्छन्। उनीहरुलाई पुजा गर्न अनुरोध गर्ने, मानिसहरुलाई थाहा हुँदैन- जब उनीहरु पढ्न र लेख्न सक्दैनन् – ती व्यक्तिहरुले भन्छन् कि उनीहरु शुग्देन पुजा गर्दैछन्, तर उनीहरु गर्दैनन्। उनीहरु अरुथोक नै गर्छन् र उनीहरु जे चाहन्छन् त्यहि गर्छन्, र त्यो धेरै खराब कुरा हो।
उनीहरुले त्यसो गर्ने कारण यो हो कि भारत र तिब्बतमा, गृहस्थहरुले पुजा गर्न सामान्य व्यक्तिहरु वा भिक्षुहरुलाई बोलाउछन्। यो एक लामो पुजा हो र यो गर्न लामो दिन लाग्छ, त्यसकारण गृहस्थले दानलगायत अर्पण गर्छन्। ती मानिसहरु झुठो बोल्छन्, र उनीहरु शुग्देन पुजा गरिरहेको भनेर भन्छन् तर उनीहरु गर्दैनन्। र उनीहरुलाई वास्तवमा शुग्देन पुजा गर्न मन लाग्दैन तर केहि किसिमको लाभ वा पैसा पाउन वा अन्य कुनै कारणले, उनीहरु आफु पुजाहरु गर्ने भनेर भन्छन् र यो निकै खराब कुरा हो र यो अत्यन्त सांसारिक कारक हो।
अन्ततः ती व्यक्तिहरु, अर्थात् गृहस्थहरु, जसले शुग्देन पुजाको अनुरोध गर्छन् उनीहरुले थाहा पाउछन् वा अनुभूति गर्छन्; उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि ती मानिसहरु सहि पुजा गरिरहेका छैनन् किनकि उनीहरुले यसले मद्दत गरिरहेको छैन भन्ने अनुभूति गर्छन्। यसले काम गर्दैन किनकि उनीहरुले सहि पुजा गरिरहेका हुँदैनन्। अन्ततः उनीहरुले आफैँ महसुस गर्छन् किनकि यसले मद्दत गरिरहेको हुँदैन, यो सहि लाग्दैन। उनीहरुले पुजा गर्न ती मानिसहरु चाहिँदैन भनेर भन्नेछन्, र अरु कसैलाई पुजा गर्न अनुरोध गर्नेछन् र यो सुनिश्चित गर्नेछन् कि त्यो व्यक्ति जसले शुग्देन पुजा गर्छ, उनीहरु पनि शुग्देन साधना गर्ने (मान्ने) हुन्छन्।
यहाँ, हामीसँग त्यस प्रकारका समस्याहरु छैन र कुनै शंका छैन। म खाली सामान्य घटनाहरुबारे भन्दै छु ताकि तपाईंसँग केहि किसिमको बुझाई होस्।
स्पष्टता र बुझ्नको लागि यो ट्रान्सक्रिप्ट सम्पादन गरिएको छ।
ट्रान्सक्रिप्ट बन्द गर्नुहोस्
धर्मपाल वास्तविक हुन् र उनी वज्रपानीका अवतरित रुप हुन्। हजारौं बुद्धहरुमा उनी ‘साङ्गे ह्लुन्ग्जे’ हुन्, हजारौं बुद्धहरुमा अन्तिम बुद्ध। उनले बोधिचित्त उत्पन्न गरे र बुद्धहरु सामु भने, ९९९ बुद्धहरु सामु भने, जुन कार्यहरु बुद्धले गरे उनले पनि ती कार्य गर्नेछन्।
उनले पहिले बोधिचित्त उत्पन्न गर्न शुरु गरे ‘रिन्चेन निंग्पो’ को साथ जो रत्नको सार हुन्। उनले त्यहाँ शुरु गरे र त्यसबेला देखि उनले आफुले गरेका काममा सद्गुण उत्पन्न गरे। इतिहासमा यदि तपाईंले यसबारे सोच्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा, महान् महासिद्ध बुतोन रिन्चेन द्रुब थिए। उनी पनि धर्मपाल थिए।
त्यसभन्दा पहिले भारतमा उनी महासिद्ध बिर्वापाका महान् गुरु थिए। उनको नाम बिर्वापा थियो।
बिर्वापाको समयमा भारतमा, धेरै भिक्षु र बौद्ध धर्मका विद्वानहरु भएको एक ठुलो गुम्बा थियो। त्यहाँ करिब ५०० जना एकै स्थानमा सँगै थिए र अतिशा ती भिक्षुहरुका गौरवान्वित अगुवा थिए। बिर्वापा त्यहि गुम्बामा बस्थे र उनी पनि महान् विद्वानहरुमध्य एक थिए।
उनले रक्सीको एक सानो बोतल राख्थे सोग अर्पण गर्नको लागि। यो उनको तन्त्रको प्रतिबद्धता थियो, त्यसकारण उनले त्यो राखे।
अतिशाले त्यो रक्सी देखे र उनी ती भिक्षुहरुको अगुवा भएको कारणले गर्दा, अतिशाले भने “तिमी यो गुम्बामा बस्न सक्दैनौ । तिमी यो गुम्बाबाट टाढा रहनुपर्दछ किनकि तिमीले गुम्बामा रक्सी राख्यौ । त्यसकारण तिमी यहाँबाट जानुपर्दछ”।
त्यसपछि उनले अतिशालाई भने, “यो रक्सीले मलाई हानि गर्दैन”।
अतिशाले भने, “मलाई थाहा छ यसले तिमीलाई हानी गर्दैन तर अरुलाई हानि गर्छ, त्यसकारण तिमीले गुम्बा छोड्नुपर्दछ।” त्यसपछि जब भिक्षुहरु मन्त्र जप्ने हलमा सँगै थिए, उनले भने “म खराब मानिस हूँ त्यसकारण म ढोकाबाट जान सक्दिन र मैले माथि चढ्नुपर्दछ”। त्यसपछि उनले आफ्नो तकिया लिए, र छत फोडेर उफ्री आकाशमा गए।
त्यसपछि उनी टाढा गए। जब उनी गंगाको किनारमा पुगे जुन भारतको एक ठुलो नदि हो, उनले भने, “म एक खराब मानिस हूँ त्यसकारण यदि मैले तपाईंलाई पार गरे भने, तपाईं पनि खराब हुनुहुनेछ त्यसकारण तपाईं म भन्दा टाढा रहनु नै ठिक हुन्छ। उनले नदिलाई त्यो भने र त्यस समय नदि छुट्टियो र उनले नदिपार गरे।
त्यहाँबाट उनी मन्दिरमा पुगे र त्यस मन्दिरमा मानिसहरुले भगवानलाई चढाउन हरेक दिन धेरै जनावरहरुको बलि दिन्थे उनी त्यस मन्दिरभित्र भगवानको मुर्तिकै छेउमा गए र उनले निकै बलियो, ठुलो मुर्ति आफ्नो घुंडाले धकेले र त्यसलाई बाहिर ठेले।
भक्तालुहरु धेरै दुखित भए तर उनीहरुले उनलाई चुनौती दिन सक्दैन थिए त्यसकारण उनीहरुले अनुरोध गरे “कृपया हामीलाई मुर्ति पुनः मन्दिरमा राख्न अनुमति दिनुहोस्। हामी यो मुर्ति मन्दिरभित्र चाहन्छौँ । कृपया त्यहि राखिदिनुहोस्।” उनीहरुले यो बिर्वापालाई अनुरोध गरे जसले त्यसपछि भने,” म यो मुर्ति मन्दिरभित्र पुनः लैजान्छु तर तिमीहरुले एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ, तिमीहरुबाट म केहि कुरा चाहन्छु”।
“के प्रतिबद्धता गर्ने?” उनीहरुले सोधे।
“यो कि तिमीहरुले अबदेखि कुनै जनावर भगवानलाई बलि चढाउन मार्नेछैनौ र भगवानलाई अर्पण गर्दा चामल वा अन्य कुनै खाना किन, यसो गरेपछि मैले मुर्ति पुनः मन्दिरमा राख्नेछु”।
मन्दिरभित्र, डाकिनी ‘नाम्क्यी जेत्सुन’ पनि छिन् त्यहाँ उनको पनि मुर्ति छ। त्यसपछि उनी त्यहाँ गए र डाकिनीको मुर्तिको शिर समाते। त्यसपछि डाकिनीको शिर आफ्नै शरीरभित्रै बिलायो, र त्यहाँ कुनै शिर थिएन।
जब शिर पत्थरको शरीरमा तल गयो, पत्थरको शरीर, त्यसपछि उनले दुई कान ताने, प्रत्येक कान आफ्नो हातले समाउँदै, शिरलाई पुनः सामान्य अवस्थामा ल्याए।
त्यसबेलादेखि उक्त देवीले नयाँ नाम पाईन्, ‘ल्हामो नाम्जुर्मा’, अर्थात् “कानबाट समात्ने”, त्यसरी देवीले नयाँ नाम पाईन्।
भारतमा उनले धर्म पढाए, धर्मको विकास गरे र त्यसलाई फैलाए। त्यसपछि उनी नेपाल गए। नेपालमा उनले ढुंगाबाट बनेको ल्हामो चण्डिकाको मुर्ति देखे।
त्यस समयमा नेपालमा, केहि मानिसहरु थिए जसले जाँच्दथे, जस्तै कि गणित, जस्तै कि भविष्यवाणी, दिव्यदृष्टि, लगायतयस्तै प्रकारका चीजहरु। उनीहरु भन्थे जनावरको बलि दिन आवश्यक छ। करिब २० लाख जनावरहरु मारिनुपर्दछ र ३ वर्षभित्र बलि दिनुपर्दछ र उनीहरुले यसो गरेनन् भने, नेपाली सरकार वा जनता, र देशले नराम्रो घटनाहरु व्यहोर्नेछ वा निकै नराम्रो हुनेछ।
नेपाली सरकार बलि दिन चाहन्थे, वास्तवमा उनीहरुले यो गर्नैपर्थ्यो किनकि उनीहरुले देशको हेरचाह गर्नुपर्थ्यो तर उनीहरुसँग त्यति जनावर थिएनन्। उनीहरु के गर्नेभनेर सोचिरहेका थिए। त्यसपछि बिर्वापाले भने, “चिन्ता नगर, मसँग एउटा उपाय छ। २० लाख जनावरहरु चाहिदैन, केवल कालो तिल, तिलको सयौं झोला भए पुग्छ”।
नेपाली सरकारले ल्हामो चण्डिकालाई बलि चढाउनुपर्थ्यो, र जब बिर्वापा अग्नि पुजा गरिरहेका थिए, केहि मानिसले ल्हामो चण्डिकालाई चितामा देखे, जब उनले आफ्नो हातबाट तिल दिए, उनीहरुले धेरै जनावरहरु पनि देखे, जुन छरिएका जनावरजस्तै देखिन्थे।
त्यस समय, बिर्वापाको धेरै उच्च गुण थियो वा धर्म र धर्म शक्तिको उच्च प्रतिष्ठा थियो। र त्यसपछि, उनको पालामा, हाम्रो देशमा ‘पान्चेन शाक्य शेराब’ थिए। उनी पनि महासिद्धका अवतार हुन् र पान्चेन शाक्य शेराब धेरै महान् विद्वान पनि हुन् तर केवल विद्वान मात्र नभइ उनी विद्वानहरुका महासिद्धजस्तै हुन्, धेरै महान्।
त्यसपछि, फेरी बबुतोन रिन्चेन द्रुब पनि आए, साथै आठ शाब्जे शेराबको पिढी पनि आए, त्यसपछि महान् विद्वान बुतोन रिन्चेन द्रुब आए।
बुतोन रिन्चेन द्रुब, गएपछि, लामा चोंखापा, जे रिन्पोछेको समयमा बेलामा उनले पुनर्जन्म लिए, महान दुन्ल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेन नामका महासिद्ध आए।
त्यसपछि दुल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेनले पनि आफ्नो जीवन परिवर्तन गरे, र त्यसपछि आए पान्चेन सोनाम ड्राक्पा। पान्चेन सोनाम ड्राक्पा तेश्रो दलाई लामाका शिक्षक हुन्। पान्चेन सोनाम ड्राक्पासँग राम्रो, धेरै उत्कृष्ट गुणहरु र धेरै उच्च प्रतिष्ठा छ। र त्यसपछि सोनाम येशे वांगपो आए।
जब सोनाम येशे वांगपो गए, उनको अर्को अवतार टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन आए।
टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन एक महान् विद्वान थिए। तेह्र वर्षको उमेरमा नै उनी एक महान् विद्वान, आध्यात्मिक, लामरिम अभ्यास गर्ने, स्पष्ट आत्म अनुभूति भएका र अरुलाई पढाउने क्षमता भएका थिए। उनका गुरु पान्चेन लोब्सांग चोक्यी हुन्।
लामा चोंखापाको समयमा नेचुंग चोक्योंग, जो सरकारका रक्षक थिए, उनले आफ्नो असली रुप देखाएनन् तर उनी एक बालकको रुपमा प्रकट भएर, लामा चोंखापाको स्थानमा उनी धेरै पटक गए, लामा चोंखापा उनका चेलाहरु सँगै हुँदा, उनले सोधे “मलाई सहयोगको आवश्यकता छ, मलाई सहयोगको आवश्यकता छ कसले मद्दत गर्न सक्छ?”
उनले धेरै पटक सोधे तर कसैले “म गर्नेछु” भनेर भनेनन्, कसैले पनि भनेनन्।
त्यसपछि एक दिन, दुल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेन जो त्यस समय लामा चोंखापाका सबैभन्दा पुराना विधार्थी थिए, उनले आफैँ सोचे, “यो बालक धेरै पटक आइसकेको छ”, र अगाडि बढेर भने “म मद्दत गर्नेछु, म मद्दत गर्नेछु”।
त्यसपछि त्यस बालकले दुल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई भने, “नभुल मलाई के भनेका थियौ, नभुल” त्यसपछि उनी गायब भए।
त्यहि समयमा, त्यस बालक, जुन लामा चोंखापा, प्रथम दलाई लामा, ग्याल्वा गेंदुन द्रुपको समय थियो त्यसबेला उनी लामा चोंखापाका चेला थिए। त्यसपछि दलाई लामा, दोश्रो, तेश्रो, चौथौ र पाँचौ दलाई लामा गरेर, पाँच पिढीपछि टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन आए। टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन लामा चोंखापाको समयमा थिए उनी दुल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेन हुन्, उनी त्यहाँ थिए। त्यसपछि ५औं दलाई लामाको समयमा उनी आए र उनको नाम टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन थियो।
एक दिन, टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन ओरेकलकोमा गए। अरु मानिस उपस्थित भएको बेला ओरेकल मार्फत नेचुंग आए, र सोधे “के तिमीलाई सम्झना छ तिमीले मलाई जे वाचा गरेका थियौ, के तिमीलाई सम्झना छ?”।
त्यसपछि टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनले भने, “मलाई सम्झना छैन”।
त्यसपछि नेचुंगले केहि जौ टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई दिए, “तिमी यो लिउ, जौलाई आगो लगाउ र त्यसलाई आफ्नो नाकले सुंघ” “त्यसपछि तिमीले सम्झिनेछौ”। जब टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन आफ्नो स्थानमा फर्के र जौ बाले, उनले नेचुंगलाई सानो बालकको अवतरित रुपमा सम्झे, उनलाई मद्दत गर्ने वाचा र उनको पुरै पुर्वजीवन पनि सम्झे।
जब उनले सम्झे, तब उनले सोचे, “अब मैले धर्मपालको रुप देखाउनुपर्दछ”। त्यसपछि उनले यो पनि भने कि नेचुंग, दाम्चेन दोर्जे लेग्पा धर्मका अर्का रक्षक हुन्, जो धेरै शक्तिशाली छन्।
त्यसपछि उनले टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनसँग कुरा गरे र भने, “अब यस समयमा, यो शुभ समय हो, हामीसँग पवित्र धर्म र लामा चोंखापाको यो प्रणाली छ, जुन सुनजस्तै छ। र यदि तपाईं त्यसको रक्षक हुनुभयो भने, तपाईं उनको उत्कृष्ट रक्षक हुनुहुनेछ, तपाईं लामा चोंखापाको शिक्षाको प्रणालीको उत्कृष्ट रक्षक हुनुहुन्छ”।
अर्कोपटक जब उनी नेचुंगकोमा गए र नेचुंग ओरेकलमार्फत आए। उनले भने “म गर्नेछु, म धर्मपालको रुप लिनेछु तर मसँग मृत्युको कारक छैन”।
मृत्युको कारक के हो? कोहि जसले क्रोधित बनाउँछ वा कोहि जसले उनमा नराम्रो कार्य उत्पन्न गर्छ, त्यसपछि त्यो धर्मपालको रुप लिने कारक बन्नेछ । त्यसकारण उनले यो भने, “मसँग त्यस प्रकारको समस्या छैन”। त्यसपछि नेचुंगले भने “तिमी ल्हासामा बस्नेछौ, ल्हासा जाऊ”। “म मृत्युको कारक बनाउनेछु”, नेचुंगले टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई भने।
त्यही कुरा नेचुंगले टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई भनेका थिए र त्यसरी नै टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन ल्हासा गए। ल्हासा तिब्बतको राजधानी हो। उनी ल्हासामा रहँदा, मानिसहरु, तिब्बती मानिसहरु, स्थानीय मानिसहरु लामो दुरीदेखि उनलाई भेट्न आउथे। उनको प्रतिष्ठा त्यस समयका पवित्र दलाई लामाभन्दा उच्च थियो। त्यसकारण दलाई लामाका एक सहयोगी, देसी साङ्गे ग्यात्सो रिसाए र क्रोधित भए र उनले टल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई मार्ने कोसिस गरे।
त्यसपछि ५औं दलाई लामाका सहयोगी, देसी साङ्गेले, टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनलाई मारे। तर पवित्र दलाई लामालाई केहि थाहा थिएन। त्यसपछि दलाई लामाका त्यस सहयोगीले पवित्र दलाई लामालाई टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेन धेरै बिरामी भएको भने। त्यसपछि पवित्र दलाई लामाले भने, “यदि उनी बिरामी छन् भने म त्यहाँ जान चाहन्छु र उनलाई भेट्न चाहन्छु”।
त्यसपछि देसी साङ्गे ग्यात्सोले भने “तपाईं त्यहाँ जान सक्नुहुन्न । पवित्र लामा कृपया त्यहाँ नजानुहोला किनकि उनको रोग निकै चक्कर लगाउने किसिमको छ ।” धेरै चक्कर लगाउने । धेरै नै । साथै यो तपाईंको लागि ठिक हुँदैन । कृपया नजानुहोला”। र उसले पवित्र लामालाई त्यहाँ जानबाट रोके जबकि अर्कोतिर टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनको शरीर जलाइराखिएको थियो।
जब उनको शरीर जलिरहेको थियो, अति विशेष धुँवा, इन्द्रेणीसहितको धुँवा उड्यो। एउटा खम्बाजस्तै धुँवासँगै इन्द्रेणी, सिधै आकाशमा, धेरै लामो…
त्यसपछि इन्द्रेणी र धुँवाको मिश्रण आकाशमै रह्यो, माथि गयो, र त्यस समय, टुल्कु ड्राक्पा ग्याल्छेनका सहयोगी धेरै उदास थिए। मानिसहरुले ग्याल्छेनलाई धेरै खराब व्यवहार गरेको बारेमा उनले सोचे। उनलाई मारेको र उनीमाथि धेरै नराम्रो कार्य गरेको सम्झे, जुन उनलाई मन परेको थिएन। त्यो धुवाँ माथि जान खोजिरहेको थियो, यस्तो देखियो कि माथि गइरहेको थिएन। जुन उनलाई चित्त बुझेन।
उनले भने, “तपाईं किन सिधै पवित्र भूमि तर्फ जानुहुन्न ? “, धुँवामा उनको वस्त्र ठोक्कियो र धुँवा तल आउन थाल्यो। माथि जान छोड्यो । तल धर्तीमा आउन थाल्यो र पुरै क्षेत्र इन्द्रेणीसहित धुँवाले भरियो जमिनमा कुहिरो लागेझैँ…
त्यसपछि उनले रौद्र रुप लिन थाले, धेरै शक्तिशाली। त्यसपछि उनी सांग्फु गए, ल्हासाबाट सांग्फु। सांग्फु ल्हासाको अर्कोपट्टि छ। उनीहरुकोमा सेत्राब्पा भन्ने रक्षक छ, यो सेत्राब्पाको कलेज हो। उनी त्यहाँ गए र त्यहिँ बसे।
त्यसपछि धेरै विभिन्न प्रकारका संकेतहरु देखिए, धेरै शक्तिशाली र यस देश, हाम्रो देशको लागि अनौठो कुरा। सबैजना भयभित थिए।
त्यसपछि ५औं दलाई लामा र उनको सरकारले अग्नि पुजाबाट एक आगो लगाउन खोजे। धेरै महान व्यक्तिहरु, जस्तै पवित्र दलाई लामा, कर्मापा, ‘दोर्जे त्रा’, र धेरै गादेन करम्पा, ती शक्तिशाली लामाहरुले त्यसलाई अग्नि पुजाबाट जलाउन खोजे। तर उनीहरुले जलाउन सकेनन्, केहि गर्न सकेनन्, त्यो धेरै शक्तिशाली थियो।
त्यसकारण उनीहरुले थाहा पाए, त्यसपछि उनिहरुले भने “अब तपाईं रक्षक हुनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहोस् दोर्जे शुग्देन”, र त्यसपछि त्यस समयमा चिनियाँ राजाबाट पनि, उनको महान् नाम धर्मपाल राखियो, चीन लगायत धेरै विभिन्न स्थानहरुमा पनि, उनीहरुले धर्मपाललाई धेरै प्रकारका प्रसाद अर्पण गर्न पठाए र धर्मपाल टोपीहरु पनि।
त्यसबेला देखि उहाँ धेरै शक्तिशाली रक्षक, अत्यन्त शक्तिशाली रक्षक, उच्च गुणका रक्षक, हुनभयो र सो कारण उहाँलाई सोग्वांग दिइयो। अर्थात ग्याल्छेनलाई दिक्षा दिँदा, त्यस बेला, लामा रिन्चेन वांगयालको ग्रन्थमार्फत धर्मपाललाई दिक्षा दिइयो। तर केहि समयपछि उक्त ग्रन्थ पनि हरायो।
त्यो ग्रन्थ हराएपछि, मानिसहरुले र उच्च तहका शिक्षकहरुले पनि धर्मपालको दिक्षा प्राप्त गर्न सकेनन्।
त्यसपछि क्याब्जे फबोंखा र ताग्फु दोर्जे च्यांगको समयमा ताग्फु दोर्जे च्यांग अत्यन्त महान् महासिद्ध थिए, उनी धेरै महान् थि, साच्चिकै महान् महासिद्ध। त्यतिबेला क्याब्जे फबोंखाले ताग्फु दोर्जे च्यांगलाई अनुरोध गरे कि, “कृपया धर्मपालको दिक्षा प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस् किनकी यो हामीलाई चाहिएको छ”,।
त्यसपछि ताग्फु दोर्जे च्यांग तुशिता स्वर्ग गए किनकी; लामा चोंखापा त्यहाँ थिए। र उनी तुशिता स्वर्ग गए र त्यहाँ उनले लामा चोंखापालाई पनि भेटे र उनले लामा चोंखापाबाट धर्मपालको दिक्षा पनि प्राप्त गरे। दुई प्रकारका दिक्षाहरु ताग्फु दोर्जे च्यांगले पाए।
त्यसरी लामा चोंखापाले ताग्फु दोर्जे च्यांगलाई दिक्षा दिए, ताग्फु दोर्जे च्यांगले क्याब्जे फबोंखालाई उक्त दिक्षा दिए, त्यसपछि क्याब्जे फबोंखाले उक्त दिक्षा क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांगलाई दिए। त्यसपछि क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांगले हाम्रा गुरु पवित्र क्याब्जे जोंग रिन्पोछेलाई उक्त दिक्षा दिए। उनले तीन पटक पाए, करिब तीन पटक। त्यसपछि गुरुहरु र उनका चार पिढीमा हस्तान्तरण भयो।
ताग्फु दोर्जे च्यांग तिब्बतीहरुको महान् महासिद्ध हुन्, यो सामान्यतः सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, उनी महान् हुन्, किनकी मुर्ति पनि उनीसँग कुरा गर्थे, यसरि नै तारा र उनी सामान्य रुपमा मानिसहरुजस्तै एकआपसमा कुरा गर्थे यसले गर्दा…
क्याब्जे फबोंखा एक महान् महासिद्ध हुन् र उनको लामो इतिहास छ र अहिलेको समयमा पनि उनी धर्मको महान् कार्यले हाम्रो देश तिब्बतको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बृद्धि र विकास गर्दै, उनी शिक्षा दिँदै धर्मको विकास पनि हाम्रो लागि गरिरहेको छ। उनी चक्रसंभाराका पनि अवतरित रुप हुन्, उनी वास्तविक चक्रसंभारा हुन्।
पवित्र लामा यो पनि भन्नुहुन्छ कि, ती तपाईंसँग भएका महान् शिक्षक, महान् महासिद्धहरुको माध्यमबाट दिक्षा आयो र हामीले पनि प्राप्त गर्यौ र यदि तपाईं यसबारे थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईंलाई जान्न मन छ भने एक किताब छ… पवित्र लामाले एक किताब उल्लेख गर्नुभएको छ जुन मसँग थियो किनकी पवित्रमार्फत यस समयमा मैले पाए र मैले तपाईंको लागि यसको फोटोकपी पनि बनाउन सक्छु, र तपाईंले यस केन्द्र र अन्य केन्द्रमा पनि पाउनुहुनेछ, त्यसकारण यदि तपाईंलाई अध्ययन गर्न मन छ भने तपाईं आफ्नो शिक्षकबाट त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ।
यी ग्रन्थहरुको टिप्पणी भारतमा प्रकाशन भईरहेको छ, यदि चाहिन्छ भने घेशेला पवित्र लामाले त्यो कहाँ छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ।
धनेश्वर भगवान दोर्जे शुग्देन।
Tags: buddha, Buddhism, dorje shugden
2 Responses to दोर्जे शुग्देनबारे परम पावन क्याब्जे जोङ्ग रिम्पोछेको शिक्षा
Tsem Rinpoche on Feb 21, 2019 at 6:12 am
Pastor Shin Tan on Feb 21, 2019 at 2:35 am
Jan 9, 2020 1,530 2
Apr 8, 2019 18,383 8
Apr 6, 2019 1,468 2
Mar 18, 2019 2,834 4
More articles from Buddhas, Dharma & Practice / Dorje Shugden / Great Lamas & Masters / H.H. Kyabje Zong Rinpoche / नेपाली